Trump oo bidhaamiyay in uu dib u eegayo isbadalka cimilada - BBC News Somali
14 Luulyo 2017
Lix todobaad kadib markii madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay in dalkiisu uu ka baxay heshiiski isbadelka cimilada ee Paris, ayaa haatan wuxuu bidhaamiyay in uu dib u eegi doono.
Trump ayaa xusay in mowqifkiisii uu waxka badali karo waxa uuna ka sheegay shir jaraaid oo si wadajir ah ay u qabteen isaga iyo madaxweynaha Faransiiska Emanyuwal Macroon, in ay ka war sugayaan isbadelada dhacaya.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna sheegay in uu ixiraamayo go'aankii madaxweyne Trump ee ka bixitaanka heshiiska isbedelka cimilada ee 2015 Paris balse Farnasiisku uu ilaalin doono heshiiskaasi.
Madaxweyne Macroon ayaa sheegay in uu garwaaqsan yahay kala aragti duwanaanshaha u dhaxeyso isaga iyo Trump, waxa uuna intaasi raaciyay in ay muhiim ahayd in horey looga socdo.
Madaxweyne Trump oo ka hadlay shir ja'raaid oo wadajir ayaa sheegay in Mareykanka uu ka tanaasuli karo mowqifkiisa uu ka qaatay heshiiski cimilada balse ma uusan ka bixin faahfaahin dheeraada.
Madaxweyne Trump ayaa ka baxay heshiiskii cimilada ee 2015 Paris bishii lasooo dhaafay, isaga oo tilmaamay talaabooyin looga xoojoonayo heshiis cusub oo dhexdhexaada oo aan khasaare u keeni doonin shirkadaha ganacsiga ee Mareykanka.
Madaxweyne Macroon waxa uu sidoo kale sheegay in ay saxneyd in dhinac la iska dhigo arinta heshiiski cimilada, xili labada hogaamiye ay ka wadahadleen sidii ay wadajir uga shaqeyn lahaayeen arrimo badan sida xbaad joojinta Suriya, iyo iskaashiga ganacsi ee labada wadan.
Labda hogaamiye ayaa sidoo kale ka hadalay dadaalada mideysan ee looga hortagayo argagizisada si gaar ahna kooxda isugu yeerta Dowlada Islaamka.